Hoogganaan Mormituu Raashiyaa Summii Nyaachifaman Shakkii Jedhutu Jira
Hoogganaan garee mormituu Raashiyaa Alexy Navalny xayyaaran utuu balali’anii akkaan dhukkubsatanii mana yaalaa jiraachuun himamee jira. Akka dubbi himtuun isaanii jedhanitti beekaa waan summii nyaachisaman fakkaata.
Kan umuriin waggaa 44 Navalniin hospitaala magaalaa Sibeeriyaan Omsk bakka doktoorri akka of wal’aalan gochuu dhaan meeshaa hafuura baafatu irra kaa’anitti geessaman.
Navalniin ennaa dhukkubsatan gara mana ofii Mooskootti deebi’aa kan turan yoo ta’u, xayyaarattiin hatattamaan akka qubattu taasisame. Imaltoonni waliin turan viidiyoo irratti akka maxxansanitti boo’ichatu xayyaarattii keessaa dhaga’amaa ture.
Dubbi himtuun Navalnii Kiiraa Yarmiish tweeterii irratti maxansuu dhaan hoogganaan garee mormituu kun utuu na dhukkuba jedhanii hin himatin dura shaayii qofaa dhugan jedhan.
Ganama sana kan dhugan sana qofa. Doktoorri akka jedhetti summiin dhugaatii ho’aa dhaan battala qaama keessatti fudhatamuu danda’a jechuun illee Yarmiish tweeter irratti maxxansanii jiran.
Doktorri hospitaala Sanaa Anatalii Kalinichenkoo haalli Navalnii wayyawaa dhufeera jedhaniiru.
Wal’aansa fudhataa jiru jechuu dhaan, doktooronni waan danda’ame qofa godhan utuu hin taane dugumatti lubbuu isaanii oolchan jedhan Kiiraa Yarmiish.
Navaanliin tarii summiin kan kennameef mormituu isaanii kan siyaasaa keessumaa Kremiliin dantaa siyaasaaf jecha haleellaa akkasii oofa jechuun kan shakkamu yoo ta’u hedduun prezidaanti Vladmir Putiniin himatu. Kremliin garuu kan akkasii keessaa harka hin qabu jechuun haalee jira.